İstanbul Havalimanı Yolcu Sayısında Atatürk Havalimanı’nı Geçemedi – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGaroonka diyaaradaha ee Istanbul
07 / 06 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
maddaarka ataturk habeenkii
IGA, oo qaada dhismaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo hawlgalka 25 ee sanadka, ayaa isku raacay in la iibiyo saamiyada shirkadda la talinta American ee Lazard si ay u iibiso saamiyada.
IGA, oo qaada dhismaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo hawlgalka 25 ee sanadka, ayaa isku raacay in la iibiyo saamiyada shirkadda la talinta American ee Lazard si ay u iibiso saamiyada. Tirada rakaabkii ka shaqeynayey garoonka diyaaradaha ee Istanbul, oo la furay sheegashada ah in ay noqon doonto garoonkii ugu weynaa ee caalamka, ayaa ka dambeeya garoonka diyaaradaha Ataturk ee Istanbul, kaas oo lagu xiray sababo yar yar. Sida laga soo xigtay Xoghayaha Gaadiidka Gobolka (DHMI), rakaabkii 5 kun ee 228 bin 447 ayaa ka hawlgalay garoonka diyaaradaha ee Istanbul bishii Maajo. Maddaarka Atlaanta ee bishii Maajo ee sannadkii hore, ayaa waxaa la siiyay 5 million 490 kun 229. Heerka deyrtu waa boqolkiiba 4.76.
JamhuuriyaddaSida laga soo xigtay wargayska Emre Deveci 31 Oktoobar 2018 wuxuu bilaabay duulimaadyo iyo 5-6 April taariikhda 2019 ee Migrationship Great Migration oo lagu qabanayo garoonka diyaaradaha ee Istanbul illaa dhammaadka bisha May ee sanadka 2019 (bisha koowaad ee 5) gaadiidka rakaabka 2 million 506 369 waxay gaartay 7 million 452 kun 218 wadar ahaan, oo ay ku jiraan 9 million 958 kun 587 khadadka caalamiga ah.
Waxaa la ogaaday in heshiiska labada sano ah ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul, oo aan la gaari karin tirada rakaabka la doonayo, ayaa dib loo dhigay illaa iyo sanadka soo socda.
Total January-May boqolkiiba 5.18 muddo hoos u dhac marka loo eego isla muddadaas sannadkii la soo dhaafay dhacay 74 205 kun oo milyan oo xnumx'y in Tegay diyaaradaha ee Turkey. Muddadan, Turkey guud ahaan ku dhacday boqolkiiba 556 13.7 ee garoomada diyaaradaha gaadiidka rakaabka guriga kun oo milyan oo 40 385, 204 boqolkiiba kororka ay barbar socdaan korodhka gaadiidka rakaabka caalamiga ah, dalxiiska ahaa kun 7 33 698 million.
Diiwaanka rakaabka ee Lixda Bilood ee Ugu Horeeya ee Ataturk
Madaarka Atatürk ayaa la xirayaa marka la furo maddaarka saddexaad
Madaarka Ataturk, World's Best 3. Madaarka la doorto
2 ilaa Sabiha Gökçen Airport. runway
Madaarka Istanbul ee Tirada Rakaabka
Kirada garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Maanta Taariikhda: 7 June 1939 Maamulka Dawlada Hoose ee Railways
U soo wareejinta Kocaeli ee Blue Flag Coast